Ibhlog- uLuhlu lweeNtengiso ezilandelayo
Ukuwisa yenye yeemodeli zeshishini ezithandwayo kwezi ntsuku. Izinzile njengomsebenzi obalulekileyo notyalo-mali olusezantsi kunye nokuguquguquka. Nangona kunjalo, ukuseta ivenkile ekwi-intanethi kunye nokubonisa iimveliso zakho akonelanga; Ukukhuthaza nokwoneliseka kwabathengi kudlala indima ebalulekileyo ukwenza naliphi na ishishini liphumelele.
Omnye wababoneleli ngeshishini, osebenza njengeqonga elisebenzayo lokusungula ishishini lakho lokurhola simahla kwihlabathi liphela yiNextschain. Makhe sijonge kwizizathu ezenza iNextschain ibe nguvulindlela kwishishini layo.
Ukukhetha okubanzi: I-Nextschain ineendidi ezahlukeneyo zabarhwebi abasebenzisa i-Shopify APP, ebenza bakwazi ukukhetha kumawaka eemveliso eziwinayo kwikhathalogu yabo kwaye bayonge kwivenkile yabo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhetha i-niche ethile; ukuba umrhwebi uyaqala, njengoko inceda ukuzithemba kunye nokuhlalutya imfuno yentengiso. Ukuqhubela phambili, kunciphisa umngcipheko ngokunjalo.
Ukuthengisa kunye nokuThengisa: INextschain ivumela abasebenzisi ukuba bajolise kwinxalenye yentengiso kunye nentengiso, njengoko iingcali zabo zilawula uluhlu lweempahla kunye nenkqubo yokuthumela. Amaxabiso abo apheleleyo ahamba phambili kwimarike, ebavumela ukuba bafumane inzuzo ephezulu kunye nokunyusa ingeniso yabo.
Izicwangciso ezahlukeneyo: Njengabaqalayo, wonke umntu ufuna ukumilisela ishishini lakhe ngotyalo-mali olusezantsi. I-Nextschain inesicwangciso sokuqalisa esasimahla ngonaphakade. Nangona kunjalo, nje ukuba abasebenzisi bafumane amava; kuyacetyiswa ukuba uphucule kwisicwangciso esingcono samava amahle.
Iinketho Shipping: INextschain ngomnye wabathengisi abalahlayo abambalwa abathumela iiodolo ngobuninzi kwihlabathi liphela ngamaxabiso afikelelekayo. Inkqubo yabo ekrelekrele yamalungiselelo ohlengahlengiso ngokuzenzekelayo kwaye ithumele iiodolo kwangaphambili ngexesha lokuphakama njengoLwesihlanu oMnyama okanye iKrisimesi yokuhanjiswa kwangexesha.
Impembelelo kwimidiya yoluntu: Imidiya yokuncokola yenye yezona ndlela zinamandla kwaye inamandla okufumana ukuthengisa ngakumbi kunye nokwandisa inzuzo. I-Nextschain inceda i-Shopify abathengisi beapps ngentengiso eyenziwe ngokwezifiso ze-Facebook kuyo yonke imveliso edwelisiweyo. Ngapha koko, ibenza bakwazi ukukhuthaza nokulawula ishishini labo.
Ukwakha igama lophawu: Ngenxa yokhuphiswano olubanzi, ukwakha igama lebrendi kuye kwavela njengenyathelo elifunekayo kumashishini. NgeNextschain, abasebenzisi banokuprinta ilogo abayithandayo kwibhokisi yokupakisha ukuze babonakale kukhuphiswano. Ngenxa yoko, abathengisi banokwakha ukuthembela ekuhambeni kwexesha kunye nabathengi babo kwaye bonwabele ukuthembeka okukhulu kwabathengi.
Iinkonzo ezingakumbi: Ababoneleli ngeenkonzo abaninzi bahlawulisa ngokushicilela ulwazi lwenkampani yomsebenzisi kwi-invoyisi. I-Nextschain yenza i-invoice ekhethiweyo simahla kuzo zonke iiodolo. Ngaphandle koku, ukuba kukho nayiphi na imiba esemgangathweni ngemveliso ngaphakathi kweentsuku ezisixhenxe, abasebenzisi banelungelo lokubuyiselwa imali epheleleyo.
Ngenxa yezi zinto zingasentla, i-Nextschain ivele njengenye yezona ntengiso zithembekileyo kwintengiso yehlabathi. Ukhathalelo lwabo lwabathengi lubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo emva kokuthengisa. Ukwakha ubukho kwi-Intanethi, yenye yeendlela ezikhawulezayo zokuqalisa ngotyalo-mali olusezantsi. Ngeenkonzo zokuwisa eziphezulu zeNextschain, abasebenzisi banokujonga kumgangatho kunye nomgangatho kunye nokunyusa ishishini labo.